Yakawanda Inonakidza Vhura Sosi AI Mirairo | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uchifarira misoro ye njere dzekunyepedzera kana AIIwe unofanirwa kuziva kuti kune akawanda anovimbisa akavhurika sosi mapurojekiti. Muchokwadi, haisi chikamu umo sosi yakavhurika iri pakaipa kusanzwisisika. Mazhinji ematekinoroji akakosha ezuva ranhasi anotsigirwa nemamwe emapurojekiti andiri kuzopa pano
Iwe unotoziva kuti AI iri izvozvi nezvichauya.
Kana iwe uchifarira kuziva kuti ndedzipi izvo zvinonakidza zvemberi mapurojekiti paAI, iwe unofanirwa kuziva zvirinani izvi:
TensorFlow: imwe yemapurojekiti akakosha. Iwe unonyatsoiziva, sezvo ichikosha. Yakagadziriswa neGoogle Brain timu yekushandisa mukati meGoogle, asi ikozvino yakavhurwa sosi. Iyo inonyanya kuzivikanwa muchina kudzidza chikuva uye inowanikwa yeWindows, Linux, macOS uye Andrid.
Kafi- Yakagadzirwa nedzimwe pfungwa dzakajeka dzinoshanda neAI kuYunivhesiti yeCalifornia, Berkeley. Iyo yakadzika yekudzidza fomati inonyanya kuzivikanwa nekodhi yayo inowedzera uye nekumhanyisa. Inowanikwa Windows, Linux uye macOS.
H2O- Imwe nyika inotungamira yakadzika kudzidza chikuva. Iyo inopa yakavhurika uye yemahara vhezheni uye yepimendi vhezheni kumakambani. Inowanikwa yeWindows, Linux, uye macOS.
Microsoft Cognitive Toolkit- Redmond kambani yakavhurwa sosi yekushandisa. Yaimbozivikanwa seCNTK, uye ine nhevedzano yekudzidza yakadzika algorithms yekufunga senge huropi hwemunhu. Inotyisa, inokurumidza, inoenderana neC ++ uye Python, uye inoenderana neWindows neLinux. Own Microsoft unoishandisa iyo yeAI maficha eSkype, Cortana, uye Bing.
Deep Mind Labs: rimwe remazita makuru mumuchina kudzidza uye AI. Yakagadzirwa neboka kubva kuGoogle's DeepMind, uye inonyanya kukunda mukudzamisa kwakadzika kwekudzidza. Iyo inongotsigira chete Linux.
CHITSA-R: Iyo Cognitive Software kubva kuCarnegie Mellon University. Kubva paLip uye inowirirana neWindows, Linux uye macOS.
StarCraft II API Raibhurari- Raibhurari yeBlizzard iyo inogonesa iyo StarCraft II vhidhiyo mutambo kuti ushandiswe seyekutsva chikuva cheAI. Inoshanda paWindows, Linux, macOS, Android, uye iOS.
numenta: imwe yeakavhurika AI mapurojekiti anoenderana nerazvino ruzivo rwehupenyu hwevanhu neocortex. Inowanikwa yeWindows, Linux, uye macOS.
Vhura CogHaingotarise chete kuAI (yakadzika kudzidza uye neural network), zvakare inotarisira kugadzira iyo AGI (Artificial General Intelligence). Yakagadzirirwa kugadzira marobhoti uye masisitimu ane vanhu-senge ungwaru. Linux chete.
Stanford CoreNLP- Iyi purojekiti iri Java yakavakirwa pachisikirwo mutauro kugadzirisa software. Iwe unogona kuziva mazwi ekuongorora kwako. Pakutanga yaingogadzirirwa yeChirungu, kunyange hazvo ikozvino inotsigira huwandu hwakawanda hwemitauro. Inowanikwa yeWindows, Linux, uye macOS.
Muporofita: Yakagadzirwa neFacebook, uye inoishandisa pachikuva chayo. Inoitwa muR nePyhton. Inokurumidza, yakarurama uye inogadziriswa, uyewo inowirirana ne Windows, uye Linux.
SystemML: chirongwa cheBMM chekutsvaga uye ikozvino chiri pasi peApache. Iyo muchina yekudzidza chirongwa cheBig Data. Inowanikwa yeWindows, Linux, uye macOS.
Theano: imwe yakavhurika yakadzika kudzidza chirongwa. Raibhurari yePython yekutsanangura, kugadzirisa, uye kuongorora kuwanda kwemasvomhu kutaura. Inoenderana neGPU uye neWindows, Linux uye macOS.
MALLET: ndicho chirevo cheMuchina Kudzidza Mutauro TOolkit »uye iJava-based toolkit yekuverengera kugadzirisa mutauro wechisikigo, gwaro kupatsanura, kurongedza, kuteedzera kwemusoro wenyaya, kuburitsa ruzivo, nezvimwe. Yakagadzirwa neYunivhesiti yeMassachusetts Amherst uye iyo University yePennsylvania. Inowanikwa yeWindows neLinux.
Yakadzika- Imwe chirongwa cheAI umo Airbus neMicrosoft vanobatana. Iyo yakavakirwa paCaffe, TensorFlow, uye XGBoost. Iyo inopa API yechimiro chechimiro, zvinyorwa, kuwongorora kwedatha, uye kuona chinhu. Inoenderana neWindows, Linux uye macOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Zvimwe zvinonakidza yakavhurwa sosi AI mapurojekiti
Wakanganwa pytorch handiti? Ndingati pamwe newe ndivo vakanyanya